ဈေးဝယ်စင်တာ Archives - YOYARLAY Digital Media and News
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဝတ်ပြုရာနေရာ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီ
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြေလျှော့ပေးနေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ဇွန်လ ၈ ရက်ကစပြီး ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ ဝတ်ပြုရာနေရာတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ရုံးတွေကို ပြန်ဖွင့်ပေးတော့မှာပါ။ သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာတော့ အလုပ်ချိန်တွေ ခွဲခြားထားဖို့၊ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ စားစရာ မကျွေးကြဖို့၊ လေအေးပေးစက်ကို ၂၄ ဒီဂရီပဲ…
Published: June 5, 20204:56 pm
အာရှနိုင်ငံတွေထဲက မလေးရှားနိုင်ငံကလည်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူနဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက်က များနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ Movement Control Order က COVID-19 ကြောင့် Lockdown ချထားတာကို ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။…
ထိုင်းနိုင်ငံက ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုမှာ မီးလောင်လို့ အနည်းဆုံး လူ (၂) ဦး သေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့က ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုမှာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့လို့ အနည်းဆုံး လူနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ (၅) နာရီ (၄၀) မိနစ်အချိန်က ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ (၈)လွှာကနေ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ သတင်းတွေမှာ…
Published: April 10, 20199:52 pm
ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန် မလိုအပ်တာတွေ မဝယ်မိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
စတိုးဆိုင် စူပါမားကတ် တစ်ခါသွားတိုင်း မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ခဏခဏ ဝယ်လာဖြစ်တတ်ကြတယ်ဟုတ်? ပြီးရင် အသုံးမတည့်ဘဲနဲ့ အိမ်မှာ ဟိုနားထား ဒီနားထားနဲ့ ချောင်ထိုးထားကြပြန်ရော။ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးရယ်။ တကယ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ကျတော့ ပိုက်ဆံက မလောက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒီတော့…
Published: April 2, 20187:03 am